UK oo Soomaaliya ka taageeraysa hagaaajinta amniga iyo horumarka
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiiru dowlaha arrimaha dowladda Ingiriiska u qaabishan arrimaha Afrika, Andrew Stephenson.
Kulanka labada dhinac ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka kala socday labadda dhinac oo uu kamid yahay safiirka UK u fadhiya Muqdisho ee Ben Fender.
Khayre iyo Andrew Stephenson ayaa ka wada hadlay adkeynta xariirka labada dawladood, horumarrada laga gaaray siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo taageerada dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya, dib-u-heshiisiinta.
Ra’iisul Wasaaraha dalka ayaa dawladda Boqortooyadda dalka Ingiriiska uga mahad celiyay taageerada iyo is-garab istaagga dadka iyo dawladda Soomaaliyeed.
Stephenson ayaa dawladda ku ammaanay guulaha ay ka gaartay dib-u-qaabaynta maaliyadda iyo siyaasada, waxa uuna ku celiyay in UK ay ka go’antahay taageerada dadaallada dib-u-habaynta, hagaaajinta amniga iyo horumarka dalka.
Andrew Stephenson oo sidoo kale kamid ah xubnaha baarlamaanka Britain ee laga soo doorto magaaladda Manchester ayaa waxay u tahay booqashadiisa Soomaaliya markii koowaad
DFS oo ka badbaaday in ay magdhow siiso ajnabi lagu xiray Muqdisho
Soomaliya 18.08.2019. 12:00
Shaqsigan u dhashay Ingiriiska ayaa lagu gannaaxay todoba oo dollar iyo mudada uu xirnaa.